soccer betting guide - IBET369
အွန်လိုင်း ကျား၊ နဂါး
ကြေးအမျိုးမျိုး၊ လိဂ်အမျိုးမျိုးနှင့် ပွဲချိန်ရွေးနည်း
*** ( ပုံနံပါတ် – ၁ ) နံပါတ်အညွှန်းများအား ပုံနှင့် ယှဉ်ကြည့်ပါ။ ***
၁။ ဘောလုံးလောင်းမည်ဆိုပါက soccer ဆိုသည့် စာကိုနှိပ်ပါ။
၂။ ပွဲကန်မည့်အချိန်အတိုင်း ရွေးပြီးကြည့်နိုင်သလို All Matches ကိုရွေးပါက ပွဲအကုန်လုံးတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။( ဥပမာ မိမိလောင်းလိုသော အသင်းသည် ည၁၀ နာရီ ကန်မည်ဆိုပါက ၂၀:၀၀ – ၀၄:၀၀ အချိန်ကိုရွေးပြီး ရှာနိုင်ပါသည်။ )
၃။ လိဒ်အလိုက်လည်း ရွေးချယ်ပြီးလည်းလောင်းနိုင်ပါသည်။
– ဥပမာ မန်ယူပွဲလောင်းမည် ဆိုပါက English Premier League တစ်ခုထဲကိုသာ အမှန်ခြစ်ပြီး Submit ကို နှိပ်လိုက်ပါက ထိုလိဒ်ထဲတွင်ရှိသော ပွဲစဉ်များသာပေါ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
– Check All ကို အမှန်ခြစ်ထားပါက ပွဲစဉ်များ အားလုံးပေါ်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ကြေးအမျိုးအစားမှာ –
– မြန်မာကြေး ဆိုပြီး ( ၅ ) မျိုးအထိ ရှိပြီး မိမိနှစ်သက်ရာကို ရွှေးချယ်ပြီးလောင်းနိုင်ပါသည်။
၅။ ပွဲများအားလောင်းပြီးပါက စာရင်းအား Bet List Full ထဲတွင် ပြန်ကြည့်နိုင်သည်။
Bet List Full ထဲတွင် Unsettlement နှင့် Settlement ဆိုပြီး ၂ ခု ထပ်ခွဲထားပါသေးသည်။
– Unsettlement ကိုနှိပ်လိုက်ပါက မိမိတို့လောင်းထားပြီး ရလဒ်မထွက်သေးသော ပွဲစာရင်းများကို ကြည့်နိုင်ပါမည်။
– Settelment ကိုနှိပ်လိုက်ပါက မိမိတို့လောင်းထားသည့် ပွဲစဉ်၏ ( အနိုင်အရှုံးစာရင်း ) ရလဒ်များကို ကြည့်နိုင်ပါမည်။
၆။ Result ထဲတွင် လိဒ်ပေါင်းစုံ၏ ဂိုးရလဒ်များကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။
ဘောလုံး ဘော်ဒီ၊ဂိုးပေါ် ဂိုးအောက်၊ မောင်းတွဲ နည်းစနစ်ကျကျလောင်းနည်း
*** ( ပုံနံပါတ် – ၂ ) နံပါတ်အညွှန်းများအား ပုံနှင့် ယှဉ်ကြည့်ပါ။ ***
၁။ Soccer ဆိုသည့်စာအောက်တွင်ရှိသော မိမိလောင်းလိုသည့် လောင်းနည်းအား ရွေးချယ်ပြီး လောင်းနိုင်ပါသည်။ (ဥပမာ – ဘော်ဒီ၊ မောင်း )
၂။ ပွဲချိန်ပြည့် ( ဘော်ဒီ၊ ဂိုးပေါ်အောက်) လောင်းမည့်နေရာဖြစ်ပါသည်။
FT.HDP မှာ ပွဲချိန်ပြည့်ဘော်ဒီဖြစ်ပြီး ထိုအောက်တွင်ရှိသော နံပါတ်များမှာ ဘော်ဒီလောင်းရန် ကြေးနှင့် အဆများဖြစ်ပါသည်။
– နိုင်မည့် အသင်းကို ခန့်မှန်းပြီးလောင်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
– အမြဲတမ်းအပေါ်တွင်ရှိနေသော အသင်းသည် အိမ်ကွင်းဖြစ်ပြီး အောက်ဘက်တွင် ရှိနေသော အသင်းသည် အဝေးကွင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
– အနီရောင်ဖြင့် ရေးထားသော အသင်းသည် အမည်းရောင်ဖြင့် ရေးထားသော အသင်းကို အကြောပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
FT.O/U မှာ ပွဲချိန်ပြည့် ဂိုးပေါင်းလောင်းရန် ဖြစ်ပြီး ထိုအောက်တွင်ရှိသော နံပါတ်များမှာလည်း ဂိုးပေါင်းလောင်းရန် ကြေးနှင့် အဆများဖြစ်ပါသည်။
– ကြေးပေးထားသော ဂိုးအရေအတွက်အား အေပါ်အောက် လောင်းရမည်ဖြစ်သည်။
– ဥပမာ လောင်းကြေးမှာ ၃ လုံးသတ်မှတ်ထားပြီး ပွဲပြီးချိန်တွင် ဂိုးစုစုပေါင်း ၄ လုံးရခဲ့ပါက ဂိုးပေါ်လောင်းသူများ အနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဂိုးစုစုပေါင်း ၂ လုံးရခဲ့ပါက ဂိုးအောက်လောင်းသူများ အနိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
– နာကျင်အချိန်ပို နှင့် မိနစ် ၉၀ အတွင်းရရှိသော ဂိုးရလဒ်များကို တွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
၃။ ပွဲချိန်ဝက် ( ပထမပိုင်းသပ်သပ် ) လောင်းလိုသူများအတွက် ဖြစ်ပါသည်။ လောင်းနည်းမှာ ပွဲချိန်ပြည့်လောင်းနည်း နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
– ပထမပိုင်း ၄၅ မိနစ်အတွင်းရရှိသော ဂိုးရလဒ်များကို တွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၄။ FT.1*2 မှာ ပွဲချိန်ပြည့် အိမ်ကွင်း၊ သရေ၊ အဝေးကွင်း လောင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။
– ( 1 = အိမ်ကွင်း, * သို့မဟုတ် Draw = သရေ,2= အဝေးကွင်း )
– FT.1*2 နှင့် ဘော်ဒီ ကွာခြားချက်မှာ FT.1*2 သည် ဘော်ဒီကဲ့သို့ ဂိုးအရေအတွက်အနည်းအများကို ထည့်တွက်ခြင်း မရှိဘဲ
– အိမ်ကွင်းနိုင်လျှင် ( 1 ) ကိုလောင်းထားသူများနိုင်မည်။
– သရေကျလျှင် ( * ) ကိုလောင်းထားသူများနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
– အဝေးကွင်းနိုင်လျှင် (2) ကိုလောင်းထားသူများနိုင်မည်။
၅။ 1.H.1*2 မှာ ပွဲချိန်ဝက် အိမ်ကွင်း၊ သရေ၊ အဝေးကွင်း လောင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ လောင်းနည်းမှာ ပွဲချိန်ပြည့်လောင်းနည်း နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
အဆသည် မိမိလောင်းလိုသော အသင်းနှင့် အလျားလိုက် တစ်တန်းထဲတွင်ရှိသည်။
(ဥပမာ – ပုံတွင် Sagan Tosu အသင်းနှင့် အလျားလိုက် တစ်တန်းထဲတွင်ရှိသော 0.89,-0.99,3.64,0.74,-0.89,4.14 တို့မှာ ထိုအသင်း၏ အဆများဖြစ်သည်။ )
– မောင်းလောင်းခြင်းကို အနည်းဆုံး ၂ ပွဲမှ ၁၀ ပွဲအထိ ကစားနိုင်ပါသည်။
– မောင်းတွဲလောင်းထားသည့်အထဲတွင် ပွဲစဉ်တစ်ပွဲသည် ရပ်တန့်၊ ပိတ်သိမ်း၊ ဖျက်သိမ်း လိုက်ပါက ဤပွဲစဉ်ရလဒ်ကို ထည့်မတွက်ဘဲ အခြားပွဲစဉ်ရလဒ်ဖြင့်သာ တွက်ချက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
စုံ/မ ဂိုးပေါင်းလောင်းနည်း၊ ဂိုးခန့်မှန်းလောင်းနည်း၊ ပထမဂိုးနှင့်နောက်ဆုံးဂိုးလောင်းနည်း
*** ( ပုံနံပါတ် – ၃ ) နံပါတ်အညွှန်းများအား ပုံနှင့် ယှဉ်ကြည့်ပါ။ ***
စုံ၊မ နှင့် ဂိုးပေါင်းလောင်းခြင်း ( Odd/Even & Total Goal )
– နာကျင်အချိန်ပို အပါအဝင် မိနစ် ၉၀ အတွင်းရရှိသော ဂိုးရလဒ်များကို တွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
၁.၁။ စုံ၊ မလောင်းရန်
– စုံမလောင်းခြင်းမှာ ၂သင်းပေါင်းသွင်းသည့် ဂိုးအရေအတွက်အား စုံ နှင့်မ ခွဲပြီး လောင်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
– Even ( စုံ ) အောက်တွင်ရှိသော ဂဏန်းမှာ စုံ၏ အဆဖြစ်ပြီး Odd ( မ ) အောက်တွင်ရှိသော ဂဏန်းမှာ မ ၏ အဆဖြစ်ပါသည်။
– ဥပမာ စုံ ( Even ) ကိုလောင်းထားသည်ဆိုပါက ပွဲပြီးချိန်တွင် ၂သင်းပေါင်း 2,4,6,8,… စသဖြင့် ဂိုးရလဒ်ထွက်ခဲ့ပါက နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။0(၂သင်းပေါင်း ၁ဂိုးမှ မသွင်းခြင်း) ကိုလည်း စုံ ( Even ) အဖြစ်သာသတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။
– ခန့်မှန်းဂိုးပေါင်း မှာ 0-1, 2-3, 4-6, 7&Over ဆိုပြီးခွဲထားပြီး ၂သင်းပေါင်း ဂိုးမည်မျှသွင်းနိုင်မည်ကို ခန့်မှန်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
– ၂ သင်းပေါင်းပြီး ဂိုးမည်မျှသွင်းမည်ကို ပေးထားသော ဂိုးအရေအတွက် ဇယားအောက်တွင် လောင်းရခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။
– ဥပမာ ၂သင်းပေါင်း ဂိုးပေါင်း ၅ လုံးလောင်းမည်ဆိုပါက 4-6 အောက်ရှိ အဆကိုနှိပ်ပြီးလောင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ခန့်မှန်းရိုက်ခြင်း ( Correct Score )
– Correct score လောင်းခြင်းမှာ ဂိုးရလဒ်ဖြစ်နိုင်ချေကို ခန့်မှန်းလောင်းခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။
– ခန့်မှန်းဂိုးပေါင်းကဲ့သို့ ၂ သင်းလုံး၏ ဂိုးပေါင်းကို ခန့်မှန်းခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ တစ်သင်းက ဂိုးမည်မျှသွင်းပြီး နောက် တစ်သင်းက ဂိုးမည်မျှသွင်းမည်ကို ခန့်မှန်းရခြင်းဖြစ်သည်။
– ခန့်မှန်းသွင်းဂိုးများကို ဇယားတွင်ပြထားမည်ဖြစ်ပြီး ထိုဇယားကိုကြည့်ပြီး မိမိလောင်းလိုသည့် ခန့်မှန်းဂိုးအောက်ရှိ အဆ (၂ ) မျိုးအနက်မှ (၁)ခုကို ရွေးပြီးလောင်းရမည်ဖြစ်သည်။
– အဆ ( ၂ ) မျိုးမှာ အပေါ်ဘက်ရှိအဆများသည် အပေါ်ဘက်ရှိ အသင်းအတွက်ဖြစ်ပြီး အောက်ဘက်ရှိ အဆများသည် အောက်ဘက်ရှိ အသင်းအတွက်ဖြစ်ပါသည်။
– ဥပမာ ပုံတွင်ပြထားသည့် အသင်း ၂ သင်းအနက်မှ Samsunspor က ၁ဂိုးသွင်း၊ Muglaspor က ဂိုးမရှိကိုလောင်းလိုပါက 1:0 အကွက်အောက်တွင် ရှိသည့် အဆ (၂) ခုအနက်မှ 7.5 ကိုလောင်းရမည်ဖြစ်သည်။
– သို့မဟုတ် Muglaspor က ၁ ဂိုးသွင်းပြီး Samsunspor က ဂိုးမရှိကိုလောင်းလိုပါက အောက်ဘက်ရှိ အဆ 25 ကိုလောင်းရမည်ဖြစ်သည်။
၂.၁။ AOS မှာ ဇယားတွင်ပေးထားသော ဂိုးအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ တခြားဂိုးများရမည်ဟုခန့်မှန်းထားပါက လောင်းရဖြစ်သည်။
ပထမဂိုး နှင့် နောက်ဆုံးဂိုးလောင်းခြင်း ( First Goal/ Last Goal )
– ဘယ်အသင်းက ပထမဆုံးဂိုးသွင်းမလဲ နှင့် ဘယ်အသင်းက နောက်ဆုံးဂိုးသွင်းမလဲ ဆိုတာကို ခန့်မှန်းပြီး လောင်းရခြင်းဖြစ်သည်။
– ဥပမာ ပုံထဲရှိ အသင်း ၂ သင်းအနက်မှ Shanghai SIPG(N) က ပထမဂိုးသွင်းမည်ဟု လောင်းလိုလျှင် First Goal အောက်ရှိ အဆ ( ၂ ) ခုအနက်မှ 1.7 ဆိုသည့် အဆကို လောင်းရမည်ဖြစ်သည်။
– သို့မဟုတ် Beijing Sinobo Guoan အသင်းက ပထမဂိုးသွင်းမည်ဟု ထင်ပါက 1.56 အဆကိုလောင်းရမည်ဖြစ်သည်။
– ၂ သင်းလုံးဂိုးမရကို လောင်းလိုပါက No Goal အောက်ရှိ အဆကိုလောင်းရမည်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာ ဘော်ဒီနှင့်မောင်းတွဲ လောင်းနည်း
*** ( ပုံနံပါတ် – ၄ ) နံပါတ်အညွှန်းများအား ပုံနှင့် ယှဉ်ကြည့်ပါ။ ***
1. ဘော်ဒီလောင်းခြင်း (Live, Today, Early)
ပုံ(၃)တွင် ပြထားသည့်အတိုင်း မိမိလောင်းလိုသည့်အသင်း၏ အဆအားနှိပ်လိုက်ပါက ယခုကဲ့သို့ လောင်းကြေးထဲ့ရသည့် စလစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။
(1.1) မိမိလောင်းထားသည့်အသင်း၏ ပေါက်ကြေးနှင့် လောင်းသည့်အချိန်တွင် ရှိနေသော ဂိုးအရေအတွက်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
– ပုံတွင်ပြထားသည့် 0[0:0] တွင် အရှေ့ဘက်ရှိ သုည သည် ကြေးဖြစ်ပြီး လေးထောင့်ကွင်းထဲရှိ ဂဏန်းများသည် ဂိုးအရေအတွက်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
– ဥပမာ သင်လောင်းသည့်ပွဲသည် လိုက်(ဖ်) ပွဲဖြစ်ပြီး အသင်းတစ်သင်းသင်းမှ ၁ဂိုးသွင်းထားသည့်အချိန်တွင် လောင်းလိုက်သည်ဆိုပါက လေးထောင့်ကွင်းထဲတွင် [1:0] သို့မဟုတ် [0:1] ဆိုပြီးပေါ်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။
– သို့သော် ထိုဂိုးအရေအတွက်မှာ
(1.2) မိမိလောင်းထားသည့် အဆကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
– အဆတွင် အနှုတ်ပါလျှင် နိုင်လျှင် အပြည့်နိုင်ပြီး ရှုံးလျှင် အဆအတိုင်းသာရှုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။
– အဆတွင် အနှုတ်မပါလျှင် နိုင်လျှင် အဆအတိုင်းနိုင်ပြီး ရှုံးလျှင် အပြည့်ရှုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။
– ဥပမာ ယခုပုံတွင် ပြထားသည့် အဆတွင် -0.80 ဆိုလျှင် ၁၀၀၀ လောင်းပါက ရှုံးလျှင် ၈၀၀ သာရှုံးပြီး နိုင်ပါက ၁၀၀၀ အပြည့်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
(1.3) အင်တာနက်မှနေပြီးတိုက်ရိုက်လောင်းခြင်းဖြစ်၍ အဆအပြောင်းအလဲများရှိတတ်ပါသည်။Auto Refresh ကို အမှန်ခြစ်ထားပါက အဆပြောင်းပါက ချက်ခြင်းသိနိုင်ပါသည်။
(1.4) မိမိလောင်းထားသည့်ပွဲ၊ ကြေး၊ အဆများ စစ်ဆေးပြီးပါက မိမိလောင်းလိုသည့်ပမာဏကို ရိုက်ထဲ့ပြီးလောင်းနိုင်ပါသည်။
(1.5) အနိမ့်ဆုံးလောင်းကြေးမှာ ၁၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။
(1.6) အမြင့်ဆုံးလောင်းကြေးမှာ ၅,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။
(1.7) မိမိစိတ်ကြိုက် လောင်းကြေးထဲ့ပြီးပြီဆိုပါက Process Bet ကိုနှိပ်ပါက ထိုပွဲကိုလောင်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
(1.8) မိမိလောင်းလိုက်သည့်ပွဲကို ဒိုင်ဘက်မှ လက်ခံလိုက်ပြီဆိုပါက Bet History တွင်ပေါ်မည်ဖြစ်သည်။
(1.9) ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ waiting ထဲတွင်ရှိနေပါက လောင်းပွဲလက်ခံရန် စောင့်ဆိုင်းနေတုန်းဖြစ်ပါသည်။
2. မောင်းလောင်းခြင်း ( Mix Parlay )
မောင်းတွဲလျှင် အနည်းဆုံး ၂သင်းမှ စပြီး အများဆုံး ၁၀ သင်းအထိ တွဲလောင်းနိုင်ပါသည်။
(2.1) မိမိတွဲလောင်းထာသော ပွဲစာရင်းများကိုပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထိုနေရာတွင် အဆများ၊ ကြေးများ၊ ပွဲများ မှန်မှန် စစ်ဆေးပါ။
(2.2) မိမိတွဲထားသည့် ပွဲများ၏ အဆ စုစုပေါင်းကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(2.3) မိမိစိတ်ကြိုက်မောင်းတွဲပြီးပါက လောင်းလိုသောပမာဏကို ရိုက်ထဲ့ပါ။
(2.4) Payout တွင် မိမိတွဲထားသောမောင်းအောင်ပါက မည်မျှရမည်ဆိုသည့် ပမာဏကို ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(2.5) မိမိမောင်းတွဲထားသည့် ပွဲအရေအတွက်ကို ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(2.6) စုစုပေါင်းလောင်းကြေးကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Process Bet ကိုနှိပ်ပြီးပါက ထိုမောင်းကို လောင်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။
– မိမိလောင်းလိုက်သည့်ပွဲကို ဒိုင်ဘက်မှ လက်ခံလိုက်ပြီဆိုပါက Bet History တွင်ပေါ်မည်ဖြစ်သည်။
– ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ waiting ထဲတွင်ရှိနေပါက လောင်းပွဲလက်ခံရန် စောင့်ဆိုင်းနေတုန်းဖြစ်ပါသည်။
Welcome to ibet369.You can trust and play fishing games, slots games, live casino, Shankome, football, and many other sports online at iBet 369. We are always trying to provide the best gaming experience and great service.Reliability is the main rule in online gambling, so we are trying accurate money transfers, and games are also designed to be fair.Also, there are various promotions, weekly commissions, holiday bonus are fully arranged for you. We have 24/7 hours of customer service and we are providing money transfer service with KBZ banking, KBZ pay, CB pay, AYA mbanking, Wave money, Ok dollar.You can advise us to get better gambling experience.